Daddabarsitoota meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti adabbii cimaa dabarsuu kan danda’u wixineen labsii qophaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Daddabarsitoota meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti adabbii cimaa dabarsuu kan danda’u wixineen labsii qophaa’e
Finfinnee, Gurraandhala 5,2011 (FBC)- Daddabarsitoota meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa irratti adabbii cimaa dabarsuu kan danda’u wixineen labsii qophaa’eera.
Wixineen labsichaa karaa seeraan alaa namoota meeshaa waraanaa: bitan, gurguran, daddabarsanii fi kuusaan hidhaa cimaa hanga waggaa kudhanii kan adabsiisuu danda’u ta’uu Abbaan Alangee Waliigala Federaalaa beeksiseera.
Daayreektara Koomunikeeshinii Abbaa Alangee waliigalaa kan ta’an obbo Zinaabuu Tunuu akka ibsanitti, koomishiniin Poolisii Federaalaa daddarbiinsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa hambisuuf keessattuu naannolee daangaatti too’annoo cimaa gaggeessaa ture.
Haaluma kanaan daddarbiinsi meeshaalee waraanaa seeraan alaa yeroo ammaa hir’achaa dhufeera jedhaniiru.
Kanaaf sababa kan ta’e hojiileen uummataa fi gumuurika waliin walta’iinsaan hojjatame gahee olaanaa qabaachuu FBCtti kan himan immoo dubbi himaa daayreektara koomishinii poolisii federaalaa kan ta’an Obbo Jeelaan Abdulaayiti.
Akka obbo Zinaabuun dubbatanitti heeri mootummaa FDRI haala qabiinsa meeshaalee waraanaa irratti seeri akka bahu kan ragga’e yoo ta’u, haaluma ragga’iinsa sanaan wixineen labsii meeshaa waraanaa too’atu qophaa’uudha.
Kanaan dura namoonni meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii socha’aa turan hidhaa salphaan yookaan wabiin hiikamaa kan turan yoo ta’u, meeshichaanis yakki cimaan yoo ittiin dalagamuu baate adabbii cimaa adabsiisaa akka hin turre ta’uu obbo Zinaabuun dubbataniiru.
Kanatti dabalees wixineen labsichaa iddoowwan meeshaaleen waraanaa itti hin qabatamne, daangaa umurii kaa’uu, haala kenniinsa hayyama meeshaalee waraanaa, hayyama haaromsuu, haquu fi meeshicha dhaaluu haalota dandeesisan ifaan teesisuu hubachiisaniiru.
Wixinee labsii meeshaalee waraanaa qabachuu ilaalchisee bahe kanarratti mariin uummataa eegaluu odeeffannoon waajjira waliigala Abbaa Alangee irraa arganne ni mul’isa.
Faasikaa Taaddasaatu gabaase